गायक प्रशान्त तामाङ प्रहरीको जागिरबाट बर्खास्त !
Posted on July 16, 2017 by 99celebrity	गायक प्रशान्त तामाङ प्रहरीको जागिरबाट बर्खास्त !Rate this post दार्जिलिङ निवासी नेपालीभाषी गायक प्रशान्त तामाङ प्रहरी सेवाबाट बर्खास्त भएका छन्। गायक तामाङलाई बंगाल सरकारले कलकत्ता प्रहरी सेवाबाट बर्खास्त गरेको हो।
सन् २००७ मा तामाङ ‘इन्डियन आइडल’ बन्नु अघि नै कलकत्ता प्रहरीमा थिए।
उनले भनेका थिए, ‘मलाई निकै दुःख लागेको छ, दार्जिलिङ युद्धभूमि वा युद्ध बोर्डर हो र? गोर्खाल्याण्ड मागको आन्दोलन रोकिने छैन। तपाईंको मातृभूमिमा लाठी लाग्दा के तपाईं चुप लाग्नुहुन्छ र?’
नेपाली गायक प्रशान्त तामाङ प्रहरीको जागिरबाट बर्खास्त !	Post navigation
हातमा बन्दुक बोक्दै किन न्यूयोर्क शहर घुमे नवाजुद्दीन ?	आइफा अवार्डः बलिउड सुन्दरीहरुको ‘क्लिभेज’ देखाउने होडबाजी (फोटोफिचर) Search 1000+ Celebrities	Popular Posts	Recent Posts	उषा अब निर्मात्री, बन्ने भयो ‘आउँदै जादै’